UDUB & RIYAALE HA OGADAAN INAY DUSHODA TAHAY AYNA QAADAAN WIXII KA DHASHA WARSAXAFADEDKA DHAGARAYSAN | Toggaherer's Weblog
Hargeysa 25 March 2009 THN
Mudane Cabdi Raxmaan Cabdi Qaadir Guddoomiye Ku xigeenka labaad ee Xisbiga Mucaaridka ah ee KULMIYE ayaa jawaab aad u kuluul ka bixiyey warsaxaafadeedkii Xoghaya Guud Xisbiga ee xisbiga Talada ahaya ee UDUB Jaamac Yaasin u dhawaan ku weeraray Xisbiga Kulmiye kuna tilmaamy Qaar Dalka ka wada qas iyo dhibaato ilaa 91 kii.
Haddaba war-saxafadeed uu ku saxeexan yahay Mudane C/raxamaan C/qaadir oo soo gaadhay Xafiiska warqabdka ToggaHerer ayaa u qornaa sidatan:-
“Eedeynta naxliga xambaarsan iyo aflagaadooyinka ku jihaysan hoggaanka Kulmiye waxay ka mid noqdeen farsamooyinka ay hawlwadeenka Udub iyo xukuumaddu ku hantaan kalsoonida
War saxaafadeedkii uu xisbiga udub soo saaray, wuxu na xusuusiyey dhammaadkii 1990 markii dalkii Soomaliya la odhan jirey badankiisu gacanta u galay jabhadihii hubaysnaa sida SNM, SPM iyo USC, isla markaasna uu kacdoonka dadweynuhu ka bilaabmay xaafadihii madaxtooyada ku xeerna, dabadeedna kooxdii la magac-baxday Manifesto ay talo ula tageen Maxamed Siyaad Barre kuna yidhaahdeen muddo badan ayaad madaxweyne dalka xukumaysay iminka dadkii wuu kaa soo hor jeeda ee iska tag oo aan dawladda Talyaaniga magangelyo kuu weydiino, halkii wax kale laga filaayey ayuu Maxamed Siyaad Barre Odayadii ergada ahaa ugu jawaabay (Mucaaridku, iimaanka laga qaad maxay doonayaan, may Dalku waa barwaaqee wax-soo-saarka beeraha iyo kaluun badda kala soo baxaan).
Jawaabtii Maxamed Siyaad Barre iyo warsaxaafadeedka Xoghayaha Guud ee xisbiga Udub waxay wadaagaan mid waliba wax aan looga fadhiyin bay la shir yimaaddeen. Labaduba xaalad khalkhal mustaqbali ah bay ku sugan yihiin.
Udub iyo Xukuumadda Riyaale way ku guul darraysteen inay doorashadii ku qabataan xilligeedii ahaa 14 abriil, 2008,
Kulmiye muddo kordhin sanad ah oo aanay taageerayaashiisu ku qanacsanayn ayuu hore u oggolaaday.
Udub iyo xukuumadda Riyaale waxay quuddarayeen inay helaan korodhsiimo saddexaad, taas oo aanay UDUB u qalmin loo kordhiyo.
Arrintaas Kulmiye mawqif cad ayuu iska taagay, inaan korodhsiimo danbe dhicin. Wuxuna aaminsan yahay inay khalad tahay in Udub iyo xukuumadda Riyaale lagu abaal mariyo xilgudasho la’aanta iyo fadhiidnimada ay ku sifoobeen. Loona baahan yahay in golayaasha qaranku ka talo bixiyeen ciddii umadda gaadhsiin lahayd doorashada.
4. Xisbiga KULMIYE wuxuu mar walba diyaar u yahay inuu ka qaybgalo Doorashooyin xor iyo xalaal ah oo Dalka ka dhaca.
ilaa maalintii Xisbiga Kulmiye la aasaasay ilaa maanta kama qaybgelin wax dagaalo ah ama shaqaaqooyin oo Dalka ka dhacay.”